Ma Jirto Maalin Aanan Galmo La Qaadan 5 Nin Ka Badan 12-Kii Sano Ee Lasoo Dhaafay Walina Waan Baahanahay - Hablaha Media Network
Ma Jirto Maalin Aanan Galmo La Qaadan 5 Nin Ka Badan 12-Kii Sano Ee Lasoo Dhaafay Walina Waan Baahanahay
HMN:- Magaceygu waa Merly Obun waxaan ahay 48 jir waxaana ku dhashay magaaladda Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika laakin hada waxaan daganahay Pretoria.
Waxaan ahay hooyo dhashay labo caruur ah ,hada waxaa ay jiraan dhinaca aabahood kaas oo aan kala tagnay 17 sano ka hor ayey u sheegtay TMZ.
Dabcan qilaaf ayan ku kala tagnay ,waxaan aaminsanaa inuusan hal nin ii qalmin marka aan ka hadlo dareemaheyga.
2003-dii waxaan furtay Carwo weyn ,waxaa ii shaqeeyo 8 qof oo 6 ka mid ah ay rag yihiin, asbuucii labo jeer ayaan tagaa xafiiskeyga.
Dabcan markii aan dhaqaalo helay waxan ogaaday inaan qabo baahi badan oo dhanka galmada ah, waxaan go’aansaday inaan la macaamilo qof walba ,waxaan lee yahay guri halkaas oo aan ku qaabilo cid kasta.
Waxaan gala galmo wadareed iyo mid kali kali ah, marka aan xaqiiqada ka hadlo tan iyo sanadkii 2004 ma jirto maalin aanan qaabilin ugu yaraan shan nin ,wali waan cafimaad qabaa waxaana I heysa baahi badan.
Raga aan la kulmay waxaa ku jiray madax iyo ganacsato caan ah laakiin markii aad qabto baahi daran oo xaga galmada ah waxba makala xulan kartid ee cid walba ayaad fahmi karta.
Ma’aqaano sanadada soo aadan waxa ay noqon karto laakin waxaan sheegi karaa inaan qabo baahi lixaadleh wali.